बाढी | नेटवर्क मौसम विज्ञान
वर्षाको सबैभन्दा विनाशकारी प्रभाव मध्ये एक हो बाढी, किनकि तिनीहरु सबै आफ्नो बाटो मा दूर ले। रूखहरू, घरहरू, सडकहरू र एक लामो आदि। यस कारणले गर्दा, यो प्राकृतिक घटना समाजमा सब भन्दा डरलाग्दो हो किनकि पानीबाट बग्ने पानी विनाश हुन्छ।
यो ठाउँ मा तपाईं पाउनुहुनेछ सबै बाढी संग सम्बन्धित यसले कहिलेकाँही सम्पूर्ण जनसंख्या र शहरहरूलाई असर गर्छ। यस शैली को विश्वव्यापी विपत्ति को मामला मा अन्तिम घण्टा। डाटा, क्षतिहरू र हराइरहेका व्यक्तिहरू तपाइँलाई जानकारी गराउन सबै खास एन्क्लेभमा असर पार्दछ।
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ3महिना .
जर्मनीमा बाढीले आज सबै समाचारलाई ओतप्रोत पार्यो। र यो कम ... को लागी होइन
वर्षा, विश्वका धेरै भागहरूमा धेरै स्वागत छ, तर जब पानी ठूलो बलको साथ वा बजारमा पर्दा ...
बाढी मौसमविज्ञानी घटना हो जुन हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ। विज्ञान पत्रिकामा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार ...
हामीले धेरै पटक सुनामीको बारेमा सुनेका छौं। यी भूकंपीय तरंगहरू विशाल छालहरूको श्रृंखलाबाट उत्पत्ति भएको ...
आँधीबेहरीले मर्सिया र एलिसन्टमा असंख्य क्षतिहरू र दुई व्यक्तिको मृत्यु गर्दछ
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ5वर्ष .
वर्षा र बतासले इबेरियन प्रायद्वीप र बेलारिक टापुहरूको सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वमा प्रभाव गरिरहेको छ ...
फोटो र भिडियो: वर्षा storm आँधीले स्पेनमा विपत्तिहरू निम्त्याउँछ
हिजो त्यो दिन थियो जुन हामी सजिलै बिर्सन सक्दैनौं। १२०l / m120 भन्दा बढीको वर्षाले दक्षिण पूर्वमा धेरै सडकहरू छोडेको छ ...
बाढीको प्रभावबाट बच्न सुदृढीकरणहरू
Andalusia हालका दिनहरुमा लामो भारी वर्षा को कारण भयानक बाढीबाट प्रभावित छ। यो यसैले छ ...
मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राख्दै हालका दिनमा ११ वटा स्पेनका प्रान्तहरू कडा द्वारा सतर्क गरिएको छ ...
एक बाढी के हो
द्वारा मोनिका सान्चेज बनाउँछ7वर्ष .
तपाईं त्यस्तो ठाउँमा जानु भएको हुन सक्छ जहाँ बाढी आएको थियो। जहाँ म नोभेम्बर २०१ live मा बस्छु हामीसँग ...